Tag: ad tech | Martech Zone
AdTech Bhuku: Yemahara Pamhepo Resource Yekudzidza Zvese Nezve Kushambadzira Tekinoroji
China, July 30, 2020 China, July 30, 2020 Douglas Karr
Iyo yepamhepo yekushambadzira ecosystem ine makambani, tekinoroji masystem, uye akaoma hunyanzvi maitiro ese ari kushanda pamwechete kushandira kushambadzira kune vepamhepo vashandisi paInternet. Kushambadzira pamhepo kwaunza nenhamba dzinoverengeka dzezvakanaka. Kune imwe, yakapihwa vagadziri vemukati nekwaniso yemari kuti vakwanise kugovera zvinyorwa zvavo mahara kune vashandisi vepamhepo. Izvo zvakare zvinotenderwa nyowani uye zviripo midhiya uye tekinoroji mabhizinesi kukura uye kubudirira. Nekudaro, nepo kushambadzira kwepamhepo